Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada si loo soo bandhigo Iibiyeyaasha Soo-baxa si loogu dabaaldego 90 Sano
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada si loo soo bandhigo Iibiyeyaasha Soo-baxa si loogu dabaaldego 90 Sano
Wershedaha farshaxanka ee abaalmarinta ku guuleysta ee ka socda xaafadda Port Morris ee Bronx ayaa iibin doona afar beerood oo la xushay-American Pale Ale, World Gone Hazy IPA, Smile My Guy IPA, iyo Das Bronx Oktoberfest-laga soo bilaabo gaadhigii 90aad ee sannad-guurada gaarka ah ee Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada 86th sagxad.
Sannadkii 90aad, Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada (ESB) waxay leedahay wax badan oo la kariyo maadaama ay Oktoberfest u keento astaanta 86th Floor Observatory oo leh Bronx Brewery khamiis kasta ilaa Sabtida, Oktoobar 14-30 saacadda 5-9 pm markii ugu horraysay ee taariikhda dhismaha ee cabitaannada lagu bixiyo gudaha Khibradda Kormeeraha.
Jean-Yves Ghazi, oo madax ka ah Dhismaha Dhismaha Dhismaha Boqortooyada ee Boqortooyada Iyada oo la hirgalinayo tayada warshadaha ee hogaamisa tayada deegaanka gudaha, martidayadu waxay ku raaxaysan karaan bandhigyadeena cusub ee dib loo soo nooleeyay, dhijitaalka iyo taabashada leh si kalsooni leh ka hor inta aysan ku nasin cabbitaanka fiidkii iyo 90-darajo aad u cajiib ah, aragtiyada hawada furan ee New York Magaalada ayaa bixin karta. ”
Dhismaha Dawlad-Goboleedka ee GREATE Grill iyo Bar wuxuu bixin doonaa $ 10 minicake-ka-yar oo NY ah oo ay weheliso xulashada brewer. Bronx Brewery waa iibiyeha labaad ee barnaamijka kor-ka-fiirinta dhismaha ka dib guushii bishii Ogosto ee uu ku guulaystay My Cookie Dealer.
Sean Valenti, oo ah afhayeenka Bronx Brewery ayaa yiri "Waxaan ku faaneynaa inaan ku biirno xoogagga Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada si aan ugu xusno Oktoberfest bartamaha magaalada New York." "Shaqadeennu waxay ku wareegsan tahay bulshada, hal -abuurka, iyo is -dhexgalka, kuwaas oo ah dhammaan waxyaabaha maskaxda ku haya markaan ka fikirno Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada."
Martida waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay cabbitaankooda ku cabbaan astaanta dabaqa 86 -aad ee astaanta ah oo ay sawirro ku sawirtaan #PopUpTop si loogu helo fursad lagu muujiyo kanaallada bulshada ee ESB. Daaqadaha billaha ah ee mustaqbalka ee Kormeeraha Dhismaha Boqortooyada ee Boqortooyada ayaa si gooni ah loogu dhawaaqi doonaa.